Jaamacadaha - Android app on AppBrain
Android Apps > Education > Jaamacadaha
Appka jamacadaha waxana ka heli kartaa dhammaan jaamacadaha dalka
by Kaafiye Technology Center
May 18, 2019 New App Version 1.3 in EDUCATION for Free
Kaafiye Technology Center
Appka Jaamacadaha waa program Bilaash (Free) ah fududeynaya isku xirka jaamacadaha iyo ardayda cusub ee daneyneysa ku biirida jaamacada.
Jaamacadaha waxay soo gelin karaan fakaltiyada ay bixiyaan, warbixin ku saabsan xogta guud ee jaamacada sida Vision, Mission, about iyo Meelaha jaamacada lagala soo xiriiri karo.
Sidoo kale jaamacadaha waxay soo gelin karaan muuqaal guud oo kusaabsan jaamacada ama muuqaal loogu tala galay admission ka cusub ee sanad dugsiyeed kasta ku haboon iyadoo Muuqaalka la dhigayo Chanelka Youtube ka jaamacada kadibna lagu xirayo Appka.
Jaamacada waxay kaloo soo gelin karaan fursadaha deeqda waxbarasho ee ay hayaan sida Full Scholarship iyo Discount.
Jaamacadaha waxay ardaydooda ku ogeysiin karaan ama ugugudin karan Dhacdooyinka, Lacag bixinta, Seminaarada iyo Xafladaha iyadoo Notification ahaan uu si fudud ugu gaarayo dhammaan ama ardayda Jaamacada kaliya.
Jaamacadaha Waxay toos ugu xiri karaan Appka Jaamacada ay leedahay ama in Appka Jaamacadaha ay u istcmaasho meel ay ardayda Natiijooyinka imtixaanka.
Jaamacadaha waxaa la siinayaa tababar ku saabsan sida ay uga faa’ideysan karaan Appkaan, una soo gashan karaan xogaha jaamacada, sidoo kalana ula socon karaan Ardayda soo codsatay jaamacada.
Qeybta Ardayda Dhigata ama ka qalin jabisay Jaamacadaha
Ardayda dhigata jaamacadaha ama ka qalin jabisay waxay soo gelin karaan Tusmooyin ku saabsan waxa jaamacada ka barteen, kana f’ideen sidoo kalana waxay kuusoo dhawyn karaan uguna baaqi karaan kuusoo biirida Jaamacada ay dhigtaan.
Sidoo kale ardayda waxay ka heli karaan Su’aalo iyo Jawaabo Aqoon korosi ah oo ku saabsan fakaltiyada ay dhigtaan.
Ardayda Jaamcadaha waxay kaloo kala socon karaan Seminaarada iyo Tababarda ay bixiyan hay’adaha, Shirkadaha ama jaamacadaha kale.
Qeybta Ardayda Cusub
Ardayda ama waalidiinta iyo guud ahaan bulshada inteeda kale waxay si fudud uga baari karaan xogta jaamacadaha oo muqaal iyo qoraal ah sida Fakaltiyada, Fursadaha waxbarasho iyo xogta guud ee jaamacadaha.
Ardayda waxay kaloo ka heli karaan Tuamooyinka ay jaamacadaha ka bixiyeen Ardayda ka qalin jabisay ama dhigata jaamacdaha, sida Magaca ardayga, Fakaltiga uu bartay, Halka uu kashaqeeyo iyo wuxuu jaamacada ka faa’iday kana kororsaday intuu dhiganayay.
Ardayda waxay kaloo ka heli karaan talooyin ku saabsan doorashada Fakaltiyada, Baraarujinta Hab dhaqanka jaamacadaha, Maahmaayo waxbarashada ku saabsan, Waxaad kala socon kartaa tirade iyo tayada jaamacadaha gobolka banaadir iyo gobolada kale.
Waxaad kaloo ka heli kartaa Fursadaha waxbarashada dibada sida dalalka Turkiga, Uganda, Bangaldesh, Malasia, Pakistaan, Ruushka iyo Wadamo kale.
Waxaa si toos ah ugula sheekeysan kartaa Whatsappka Jaamacada
Waaxd fariin toos ah ugu diri kartaa Jaamacada
ama appka ardayda dhigata fakaltiyada fursadaha gelin guud heli iyo jaamacada jaamacadaha jabisay kale kaloo karaan qalin qeybta saabsan sida sidoo socon soo waxay xogta
aad ahaan allah dalka iyo kaafiye technology waa wax waxn
aad ahaan allah dalka iyo kaafiye muhiim technology waa wax
asc ddd diiwingilin doing here kusoo toos ubahanay waxn xariro
android.permission.ACCESS_DOWNLOAD_MANAGER, com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS, com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT, com.sec.android.provider.badge.permission.READ, com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE, com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
Android Jetpack core Android Architecture Components Firebase Android Jetpack VersionedParcelable Volley
More from Kaafiye Technology Center
SYL Schools Online
Adult Commercial and Secondary School
WAAYA ARAG SCHOOL
Al Islam School App
Blue Sky Energy company